Soo-saaraha Qalabka Feejignaanta Bannaanka Dibedda ee Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Ruiyi
Gawaarida qalabka xulashada koowaad ee Qalabka Dibedda Dibadda ee Isku-laabma Kabaha, kaas oo ku habboon, wax ku ool ah oo wax ku ool ah. Ilaalinta deegaanka.
Si fudud loo raro: waa la isugu soo ururin karaa ilbiriqsiyo, shir looma baahna! Waxaa loo laabi karaa boorsada gacanta si loogu keydiyo si fudud. Cabbir yar, oo ku habboon in la dhigo qolka, derbiga ama jirridda baabuur kasta oo heer sare ah. Baabuurka burburay ee korantada ayaa aad ugu habboon dukaamaysiga gaadiidka, dibedda u soo baxa ama sida wax soo saarka gawaarida, oo aad ugu habboon safarka, safarka, fasaxa, beerta, baarkinka, kaambada, dukaanka raashinka, xayawaanka, howlaha isboortiga ee banaanka ah ama waxyaabo uun dhaqaaqa.
Gawaarida xulashada koowaad ee loogu talagalay Kaar Dib-u-laabashada Qalabka Fudud ee Dibedda, taas oo ku habboon, wax ku ool ah oo hufan. Ilaalinta deegaanka.
Si fudud loo raro: waxaa lagu soo ururin karaa ilbiriqsiyo, shir looma baahna! Waxaa loo laabi karaa boorsada gacanta si loogu keydiyo si fudud. Cabbir yar, oo ku habboon in la dhigo qolka, derbiga ama jirridda baabuur kasta oo heer sare ah. Baabuurka burburay ee korantada ayaa aad ugu habboon dukaamaysiga gaadiidka, dibedda u soo baxa ama sida wax soo saarka gawaarida, oo aad ugu habboon safarka, safarka, fasaxa, beerta, baarkinka, kaambada, dukaanka raashinka, xayawaanka, howlaha isboortiga ee banaanka ah ama waxyaabo uun dhaqaaqa.
Astaamaha waxaa ka mid ah: gacanta lagu hagaajin karo si sahlan loo qaadi karo, iyo kuwa haysta mesh cup cup 2 waxay hubinayaan badbaadada cabitaanka
Gaadiid ku habboon - aad ugu habboon qaadista qalabka dhacdooyinka isboortiga ee dibadda, riwaayadaha, dalxiisyada baarkinka, oo aad ugu habboon in lagu isticmaalo guriga. Fadlan la soco inaysan ku habboonayn rarida carruurta.
Riix ama jiid:gacmo-celin kala-soocid ah iyo gacan-qabsiyo riixid jiidan oo la hagaajin karo ayaa loo heli karaa xulashadaada. Aad ugu habboon in loo isticmaalo jardiinada, dibedda loo baxo ama alaab badeecad ahaan loo isticmaalo, aad ugu habboon tagidda xeebta, kaamam, dhacdooyinka isboorti ee dibadda iyo munaasabad kasta oo aad isleedahay waa ku habboon tahay.
Dahaarka la saari karo iyo dambiilaha dambe. Saqafka la saari karo ayaa ka ilaalin doona alaabtaada roobka iyo shucaaca ultraviolet-ka. Dambiisha dambe waxay ka dhigeysaa keydinta mid aad u habboon.
Naqshadaynta aadanaha:gaadhigan afarta lugood leh ayaa bareeg ku leh hore iyo gadaal si uu u xakameeyo dhaqdhaqaaqiisa markii la riixo ama la jiido. Wadarta dhererka trailerku wuxuu gaari karaa 44 inji (qiyaastii 111.76 cm), taasoo kuu oggolaaneysa inaad jiido trailerka si raaxo leh.
Isku laabashada iyo kaydinta degdegga ah: naqshad isku dhafan, oo isku laaban cabir yar, waxaad ku laaban kartaa hal gacan; badbaadi waqti iyo boos, ku habboon inaad ku qaadatid dhammaan baahiyahaaga beerta.
Gacan lagu hagaajin karo: gacanta lagu hagaajin karo, waxay u rogi kartaa si habsami leh hadba baahida loo qabo; gacanku ma dhici doono, sarajooggeeduna wuxuu ku xirnaan doonaa isku dhejinta; looma baahna in laga walwalo gaadhiga aan la xakamayn karin.
La qaadan karo, meel bannaan: waxaa loo laabi karaa qaab iswaafajin ah waxaana lagu ridi karaa kiiska xambaarsan ee lagu rakibayo gaariga jirkiisa ama keydkiisa.
sheyga No CW02
Waxyaabaha Birta iyo 600D polyester
Cabir 67 × 41 × 46cm
Cabbirka laabma 46 × 17cm
Xirxirida 1pc / boorsada
sheyga No CW03
Cabbirka laabma 76x30x20cm
Dhar 600D oxford
Waxyaabaha Tuubo bir ah
Astaanta Astaanta kartoo
Loo adeegsaday Kaamam，xeebta，kalluumaysiga
Display Bandhig faahfaahsan
♦ Adeegso seenyo
Alaabtaan waxaa loo isticmaali karaa waqtiyo badan oo firaaqo ah, sida u aadaya baarkinka dalxiis, u bixida bannaanka waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado qaar ka mid ah cuntada, biyaha, sahayda iyo wixii la mid ah. Tag goobta rinjiyeynta, waqtiga firaaqada ah, iwm. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu rakibo waxyaabaha loo baahan yahay, si sahlan loo isticmaali karo. Gawaaridaani waxay ku habboon yihiin safarada suuqa, baarkinka, xeebta, dhacdooyinka isboorti, kaamam, iyo waxyaabo kaloo badan!
♦ Isticmaal rakibaadda
Alaabtaan waa fududahay in la rakibo. Fadlan tixraac buugga rakibidda iyo hawlgalka.
Kudar dir an iimayl ku sales@ruiyitools.com
Feedback Faallo celinta macaamiisha
Macaamiisha guud ahaan waxay ka tarjumayaan in saameynta isticmaalka ay wanaagsan tahay, hawlgal fudud, rakibid habboon iyo tayo sare leh.
Noqo iibsadaha xiga ee dib u eegis ku sameeya sheygan.
Asalka Asalka Qingdao, Shiinaha
Magaca Rand Junmei
Codsiga Bannaanka Xeebta Socdaalka ee Socdaalka
Astaanta Logo Gaaban
Kartida Bixinta 50000 Cadad / Cadad sanadkiiba
Faahfaahinta Baakadaha sanduuqa kaarboon
Port Qingdao dekedda Shiinaha
Waqtiga hogaaminta ② Tirada (Cadadka) 1-300> 300Est. Waqti (maalmo)
Xiga: Tayada Sare Loading Dayactirka Gawaarida
S: alaabtaadu ma keeni kartaa astaanta martida?
S: Ma aqoonsan kartaa wax soo saarkaaga gaarka ah?
S: Sidee alaabooyinkaagu u samaysan yihiin? Qalab noocee ah ayaa jira?
J: Is-horumariyo ama loo habeeyay Maaddada: birta, birta, caagga, dharka, iwm
S: Mudo intee le'eg ayay horumarka caaryadaadu qaadataa?
J: 7 maalmood
S: Miyaad lacag ka qaaddaa caaryada? Waa imisa? Ma soo celin karaa? Sidee loo soo celiyaa?
J: Kharashka caaryada, sheeg sida ku xiran xaaladda badeecada gaarka ah iyo tirada.
S: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta?
J: Awoodda caarwalba
S: Immisa sano ayaa ah nadiifinta iyo dayactirka caadiga ah?
J: Awoodda wax soo saarku waxay kuxirantahay tirada wasakhahaasi kala duwan.
S: Waa maxay habka wax soo saarkaagu?
J: Macaamilku wuxuu go'aamiyaa tirada badeecada, qaabka, xigashada, qandaraaska, lacag bixinta, wax soo saarka iyo keenista
S: Mudo intee le'eg ayey qaadataa waqtigaaga alaab-bixinta ee caadiga ahi?
J: 2-3 bilood, aasaas iyo tiro cayiman
S: Miyaad leedahay tirada ugu yar ee alaabtaada ah?
J: Hadday saas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku? Maya,
S: Intee ayey le'eg tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah?
A: 800 mitir murabac ah, qiimaha wax soo saar 50 bilyan
S: Muddo intee le'eg ayay tahay adeegga adeegga alaabooyinkaagu?
A: 3-5 sano isku celcelis, waxay kuxirantahay xaalada alaabada gaar ah,
S: Maxay yihiin qaybaha gaarka ah ee alaabtaadu?
J: 1. Gawaarida gawaarida lagu hagaajiyo
2. Gawaarida madadaalada ee banaanka
3. Qalabka beerta (ubax xajin iyo aqalka dhirta lagu koriyo)
4. Xerada xayawaanka
5. Gawaarida qalabka beerta
6. Gawaarida PU
7. Shaag giraanta
8. Wadada kore ee Atv
S: Maxay yihiin hababka lacag bixinta ee la aqbali karo?
J: Baan wareejin
S: Waa kuwee kooxaha iyo suuqyada ay alaabtaadu ku habboon tahay?
J: Kooxaha caadiga ah ee nolol maalmeedka,
S: Wadamadee iyo gobolkee ayaa alaabadaada loo dhoofiyey?
J: USA, Canada, UK, France, America, Europe, iwm
S: Sheygaagu ma yahay mid wax-ku-ool ah? Maxay yihiin faa'iidooyinka gaarka ah?
J: Haa, isla badeecada, waxaan haysanaa qalab iyo qiime ka fiican.
S: Shirkadaadu ma ka qaybgashaa bandhigga? Waa maxay faahfaahintu?
J: Kaqeybgal bandhigyada, Carwada Shiinaha Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta, iwm
PU Wheel, Shiinaha PU xumbo Wheel, Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Gawaarida Caster, Shiinaha PU Wheel, Shiinaha Mashiinka la taaban karo,